Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA – Page 31 – Ny Teny tonga Nofo, Nofo tonga Mofo, Mofo zary Aina
Hafaliana feno firariantsoa no iarahabana antsika izay manokatra sy mijery ary mamangy ity tranokalan’ny AFAFI- FET ity. Ho amintsika lalandava anie ny fahasoavan’i Jesoa Tompo sy ny fiombonana ao amin’ny Fanahy Masina. Efa ela ihany …
Ry vahoaka malagasy tsivakivolo, Ry kristianina havana, “Ho aminareo anie ny Fiadanana!” (Jo 20, 19) Io Tenin’i Jesoa Kristy tafatsangan-ko velona, niseho tamin’ny mpianatra nihidy tao an-trano noho ny tahotra io, no entinay hiarahabana anareo …
Te hahafantatra ny fiainan’ny tanora ny Fiangonana ka manentana azy ireo hamaly fanontaniana vitsivitsy ho fiatrehana ny sinaoda amin’ny taona 2018. Miantefa amin’ireo 16 ka hatramin’ny 29 taona io fanadihadiana io ka azonao atao ny …
Miady amin’ny kolikoly isika
« Mba tsy ho voasariky ny fanaovana kolikoly ireo manan-katao sy ireo mpanao politika ary ireo mpitondra fivavahana », io ny Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina mandritra ity volana febroary ity. Indro ny horonan-tsary manazava izany :
Miditra ny taona fahatelo fiomanam-panahy amin’ny fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET eto Madagasikara isika amin’izao taom-pikatrohana izao izao, dia ny “Taonan’ny Eokaristia” izany. Tsara ny manamarika fa tsy ny teny Faneva ihany tsy …
De webmaster dans la catégorie Tonga soa
Hafaliana feno firariantsoa no iarahabana antsika izay manokatra sy mijery ary mamangy ity tranokala ity. Ho amintsika lalandava anie ny fahasoavan’i Jesoa Tompo sy ny fiombonana ao amin’ny Fanahy Masina.